RASMI: Naadiga Woxool oo ka bad-baaday inay u laabato horyaalka heerka 2-aad ee Soomaaliya – Gool FM
(Muqdisho) 08 Agoosto 2017. Dadaal dheer kaddib kooxda Woxool ayaa xaqiiqsatay inay baaqi ku sii ahaaneyso horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya isla markaana aysan dib ugu laaban doonin heerka labaad kaddib markii ay gool madi ah ku martay Bariga Dhexe.
Kooxaha Woxool iyo Bariga Dhexe ayaa kulan kala bax ah galabta ku wada ciyaaray garoonka Jaamacadaha kaa oo ciddii adkaata ay sii joogi doonto horyaalka heerka koowaad.
Woxool ayaa darbiyada soo cuksatay iyadoona xaqiiqsatay booskeeda xilli uu xiriirka kubbada cagta ee soomaaliya uu ka jaray 3-dhibcood oo ay ka xayuubsadeen kooxda Jeenyo.
Xiriirka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu kulanku ahaa mid musuq ah isla markaana la sii daayay kooxda Woxool, waxaa gabi ahaan la tir tiray dhibcaha kulanka waxayna sheegeen inay socoto baaritaano dheeri ah oo loo taag hayo inay ganaaxyo ku biyo shuban doonaan.
Sikastaba, Woxool oo saddexdaa dhibcood ka soo sabartay ayaa iminka si nadiif ah u ceshatay booskeed kaddib ciyaar la isku gubtay ay guul ka heleen Bariga Dhexe oo qudheeda aad u dooneysay inay baaqi ku sii ahaato heerka koowaad ee horyaalka Soomaaliya.
Muqdisho United ayaa horey ugu dhacday heerka labaad waxaana iminka ku wehlin doona Bariga Dhexe.
MA Wiilaa mise waa Gabar uurka cusub ee loo leeyahay Cristiano Ronaldo?